TSY KRIZY POLITIKA IHANY NO MISY ETO FA KRIZY ARA-PANAHY KOA – MyDago.com aime Madagascar
TSY KRIZY POLITIKA IHANY NO MISY ETO FA KRIZY ARA-PANAHY KOA
« Andao hiarahantsika mandrava ny fanjakan’ny devoly » Io no lohahevitra hifantohan’ny hetinandrom-bavaka tanterahin’ny fiarahamiasan’ny sampana foibe Fjkm, izay ahitana ny sampana Fifohazana, ny Masera Mamre, ny Stk, ny Sampati, ny Vokovoko Manga, ny Sekoly Alahady, ny Evanjelistra an-tanan-dehibe. Araka ny fanazavan’ny Mpitandrina Ranaivonarivo Tiana Alisoa tonian’ny sekoly alahady Fjkm dia efa nanomboka ny 16 Jolay teo izany herinandrom-bavaka izany ary hofaranana amin’ny sabotsy izao. Fiangonana teo eo anivon’ny Fjkm no hanatontosana izay ka tafiditra ao anatin’izany ny Fjkm Anosivavaka, Ambotsiry ary Andrainarivo. Misy lohahevitra hazavaina mandritra ny fotoam-bavaka amin’ireo fiangonana tsirairay ireo, ka anisan’izany ny hoe « inona marina ny fototry ny krizy eto amin’ny firenena ary inona no ambaran’ny soratra masina » ? « Satanisma franc maçonnerie,fannompoantsampy » ahoana hoy ny soratra masina. Ary « fampihavanana , fifamelan-keloka, fahamarinana » lasitsaina kristiana iainana ny soratra masina ? Ny antony hanaovana ity herinandrom-bavaka ity hoy ny fanazavana dia tena ao anaty fahasahiranana ny vahoaka Malagasy ankehitriny, manjaka tanteraka i Satana. Tsy ny krizy politika ihany hoy izy ireo no isy eto amin’ny firenena fa ny krizy ara-panahy koa Marihina fa ny Sabotsy izao no hanatontosana ny famaranana ny hetsika ka hisy fanompoam-pivavahana lehibe hiarahana amin’ny Foibe Fjkm manomboka amin’ny telo ora tolankandro eny amin’ny Fjkm Andrainarivo. Amin’io ihany koa no hivoaka ny fehinkevitra nandritra ny herinandrom-bavaka.
9 réflexions sur « TSY KRIZY POLITIKA IHANY NO MISY ETO FA KRIZY ARA-PANAHY KOA »
Atambaro ny hery amin´ny asa fifohazana ihany koa handravana ny fanjakan´ny Satana
Dia maninona no zavatra efa nanomboka vao lazaina ??
Ity tandra-metaka ity ihany koa aiza moa no hisy zavatra
hanjary e??tsy fahamatorana mihintsy izay hatao fa toy izao foana isika, dia aiza no hiarahana miombona
@’izay anio efa fahafiry??sa i Solo Razafy no taraiky vao nanome ilay vao2 kosa???sa tsy natao ho an’i
Ny kristianisma dia fomba sy fijery ny fiainana nampidiriny colons @ firenena rehetra eran-tany, mba afahan-dry zareo manohy ny tanjona kendrena:
– handrava sy hanimba ny fomban-drazany firenena tsirairay
– hampiantra famolavolana ny sainy vahoaka tsy hikarokaroka fa hihaiky fotsiny ny didy avy @ vahiny manjanaka hoe » ny lanitra no banjino fa aleo ny ao ambany tany na ambony tany sy anaty ranomasina, ho anay votom-pahaizana sy fahalalana ».Dia misosa ery ny fandrobana sy fangalarana ary fampahantrana ny vahoaka.
– Dia very fanahy ny malagasy, tsy any atsy ary tsy any eroa..dia toy izany daholo izay « colonisés » e! Na « francophones », na « anglophones », na « hispanophones » na « lusophones ». Mahonena ny niafarany firenena maro samihafa satria tsy misy fototra hijoroany intsony mba ho haja sy hasim-pirenena fa dia » chrétiens pauvres et misérables » ary lasa « terres de nouvelles missions » @ alalany ONG sy paika ratsy afa.
– Mora foana ho any vahiny mpanjanaka no manodikodina ny vahoaka efa marefo saina sy vatana,ka dia toa tsy misy fivoarana mitsimoka mihintsy satria raha misy masahy mijoro manohitra dia haverina aingana @ « point de départ de la colonisation » dia ny mivavaka.
– « Spiritualité » no mifandraiky kokoa @ fomban-drazana tena malagasy ary « religiosité » no nampidiriny vahiny ka lasa mahatonga ny malagasy miteny fa kristianina daholo ny malagasy.
– Raha ampanarahana « pragmatsime » anie ilay « finoana » dia tsy ho izao mihintsy ny miseho na ho any Madagasikara na ho any Afrikana na izay firenena voajanaka rehetra e!
Ka rariny ve hoe ny krsitianisma nampidiriny vahiny no afahandry zareo mandrava sy mamono ary tokony hampalemy ny vahoaka lava izao faoana e!
DIA EO NY ISLAMISME, mitsofoka aingana loatra any Madagasikara ka hifamotofoto tanteraka rehefa hifandrafy ny sunites sy chiites.
IZAY VAO TENA RAVA TANTERAKA NY ATAO HOE MALAGASY ka ?????
Na atao hoe somary tara aza ny fivoahan’ny lahatsoratra, raha ny hevitro manokana dia tsy maninona izany!
Mahafaly mandrakariva, ary isaorana an’i Mydago! (Solo Razafy)
Tsy ho lava safary, na hanao fanakianana fahatany, na sanatria hitsikera ny fomba fijery sy finoana na tsy finoana ary fironana samy hafa aho, kanefa indraim-bava kely:
Andriamanitra tsy mba manery na iza na iza, hino Azy!
« Finoana no andehanana fa tsy fahitana »
Miombon-kevitra amin’ny mpitandrina Ranaivonarivo aho!
ILAY SATANA MPANDAIGA MPAMITAKA NO MANJAKA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO!
Samia isika mandinin-tena amin’izay avoakan’ny vavan-tsika!
Ary hitandrina mba tsy ho tafiditra anaty vovony
Na dia eo aza ny fahasarotan’ny fandehan-javatra dia:
« MIFALIA AMIN’NY FANANTENÀNA, MIHARETA AMIN’NY FAHORIANA, MAHARETA AMIN’NY FIVAVAHANA eee!! »
(Tsy manadino na mandao anareo rehetra akory Ranavalona a! sy ny namana….)
Tena elaela mihintsy Neninoro izany an!!arabaina aloha tonga soa.
Eny e! misy marina ny tenin’i Randria ary tena tsy azo lavina fa kosa…….
aza hadino fa isika Malagasy dia nanana ilay ZANAHARY ninoantsika na dia tsy mbola nisy azy
ny fanjanahana nanoro ilay Andriamanitra hono, isika nanana ny Zanahary izay finoana tao anatin’ilay
Soatoavina miaro FAHENDRENA BE DIA BE izay fantatr’izao tontolo izao ny HASINA maha manankasina
antsika izay tsy takona hafenina na aiza na aiza halehantsika io dia zavatra HITAKO MATETIKA @’izay
toerana haleako na zavatra hataoko ( ohatra an!)ny mampalahelo a@ Gasy sasany dia MISOLELAKA @
ireo mpanjana ka manaraka moramora ny lalan-dratsin’izy ireo dia HADINO ny an’ny tena, ka tsy mahagaga
ahy ny TSIKERAN-dRandria eto fa tena marina ny azy fa lasa fitaovana fotsiny sisa ilay finoana nefa raha
mitana ilay TENA FINOANA an’i ZANAHARY sy FAHATAHORANA azy TOA ILAY TANY AMPIANDOHANA
isika dia tsy ho Toy izao no TOETSAINTSIKA indrindra isika TANA no tena VOASARIKA MORAMORA ny @’
io TOETSAINA LOMORINA TIA TENA, TIA KELY!,ORY HAVA-MANANA dia ny tena loza ity LAINGA MARIVO
TOTOTRA tena efa saika hiainana isanandro io ao TANA miala tsiny fa izaho koa Tana fa rehefa vandana dia
kary ka rehefa tsy ao anatin’io ianao dia misaora ny avo, ny FITAKA sy AHAFETSIFETSENA dia ny mpanjanaka
daholo no NITONDRA IRENY toa ny nitondrany ny SIDA fa ny GASY tsy nahay izany velively.
Arakaraky ny hivavahan-dramalagasy no toa hilatsahany ao anaty lava-piringa !
Miala tsiny fa tsy ny Fivavahana mihintsy hoy aho, no hanavotra ny vahoaka malagasy amin’izao zavatra hiainany izao !
Resaka fandrebirebena izany, sy fandanian’andro fotsiny !
Impiry ianareo no efa nolazaina fa misy olona tsy mandeha mivavaka izany, manana fitondran-tena mendrika lavitra noho ireo milaza azy ho môpera sy pasitera ary tsy aiko intsony ireo !
Tsy rarahin’ny pipian’i domelina inona izay ianareo mivavaka maraina, antoandro sy hariva !
Na mivavaka ianao na tsia, rehefa mahay miaraka sy tsy manao ratsy amin’ny ankohonana na mpiara-belona aminao, ary indrindra manàja sy manaraka tsara ny Lalàna sy fitsipika rehetra misy, dia efa zava-dehibe !
Izany no ilaina amin’ny fiainana ! Mety misy tsy ampy, fa aoka kely ry zareo mba apetraka any amin’izay toerana tokony sahaza azy izany Andriamanitra, Zanahary, Allah, Bouddah, Siva..Coca izany, fa tsy entina hamahàna krizy paolitika â !!
Tena mandreraka be ! Sa ahoana indray ranavalona ?
Misaotra Ranavalona a!
Samy manana ny heviny avy ny rehetra raha momba ny mivavaka na tsia e! Tsy asiana resa-be izany akory.
Tsy dia hoe ny hiraharahian’i domelina ahy, na izay mivavaka velively akory ny tanjona raha nanisy teny momba ny lahatsoratra etsy ambony ny tenako.
Olona samy manantsaina, sy manana ny safidiny avy ny tsirairay avy!
i Kintana nie efa tenenina foana e!!ialah be doika an!!
tsy mandaha ano mihintsy aho fa tokony lanjalanjana tsara ny toerana hisy ilay fivavahana,
tsy politika ihany izao mahazo antsika izao fa asan-devoly ary miaiky izan daholo ny rehetra koa ahoana no
lazainao fa tsy hilaina n fivavahana lesy???iialah koa ity toa lalina koh! io ara ialahy ihany no miteny fa » tokony
hapetraka @ toerana sahaza azy izany Zanahary izany » dia izay izany koa inona indray???asakasak’izay manao
fitaovana ilay fivavahana fotsiny kosa aloha, tsy mifamatra indray aho ny @’izay.
Précédent Article précédent : BOTOZAZA PIERROT : TSY MITONDRA FITONIANA NY FAMPIATOANA IREO MINISTRY NY ANKOLAFY RAVALOMANANA
Suivant Article suivant : Me Hanitra RAZAFIMANANTSOA : « tsy meloka ny Filoha Ravalomanana »